Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Ọdụ ụgbọ elu Budapest na Croatia
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Croatia na -agbasa ozi ọma • Hungary na -agbasa akụkọ • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ọdụ ụgbọ elu Budapest ekwenyela na ọ ga-ejikọkwa na Croatia n'oge okpomọkụ a mgbe afọ 13 gachara. Ikwusa ozi oge Ryanair na Zadar, isi obodo Hungary ga-enye njikọ ugboro abụọ kwa izu na ụsọ oké osimiri Dalmatian site na 2 July.
Balázs Bogáts, Onye isi nke Development Airline na-akọwa, sị: “Ibanyeghachi na Croatia na netwọkụ anyị bụ akụkọ dị egwu, ọkachasị maka njem nleta na obodo abụọ ahụ - ihe karịrị ọkara nde ndị Hungaria gara mba ndịda ọwụwa anyanwụ Europe na afọ gara aga. Ọdụ ụgbọ elu Budapest. “Obodo Zadar nke akụkọ ihe mere eme na obodo ochie ya nke Roman mkpọmkpọ ebe, ụlọ ụka ochie na ụlọ oriri na ọ cosụ cosụ mba ụwa abụwo ihe na-adọrọ mmasị ndị Hungaria kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a na nloghachi anyị ahụla ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa Croatian bịara n’obodo anyị mara mma na-eto nke ukwuu. O doro anya na ụgbọ elu Ryanair dị n'etiti njem njem njem abụọ ndị a ma ama ga-achọ nnukwu ego n'oge ọkọchị.
Launch n'oge ọkọchị, Ryanair ga - arụ ọrụ ahụ site na ntọala Lauda ọhụrụ ya - enyemaka nke obere ụgwọ (LCC) - na Zadar. Inyekwu oche 300K karịa oge kachasị elu, Irish LCC bụ otu n'ime ụgbọ elu na-eto ngwa ngwa na Ọdụ ụgbọ elu Budapest n'oge a yana ebe 58 na netwọkụ Hungary.